ကိုယ်ဝန်, ကလေးမွေးဖွား | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးအစား: ကိုယ်ဝန်ဆောင်, ကလေးမွေးဖွား
ယခုဆေးရုံများကလေးတွေအတွက်ဆေးထိုး vikasol Karaganda Prompt ။ ဒါကမဖြစ်မနေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်ငါ၏အမိ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူဖြစ်သနည်း
ယခုဆေးရုံများကလေးတွေအတွက်ဆေးထိုး vikasol Karaganda Prompt ။ ဒါကမဖြစ်မနေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်ငါ၏အမိ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူဖြစ်သနည်း စာအရေးအသားအတွက်ငြင်းဆန်တိုးဖို့ရေးပါ။ ထိုသို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုအများဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသူတို့အဘို့ဖြစ်၏ ...
2 Kajtex Tramonto 1 ပိတ်ချောဖို့ 14 ။ အဘယ်သူသည်ဤတွန်းလှည်းခြင်းရှိသနည်း
2 Kajtex Tramonto 1 ပိတ်ချောဖို့ 14 ။ အဘယ်သူသည်ဤတွန်းလှည်းခြင်းရှိသနည်း မရအဆင်ပြေ kazyrk ကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးသခင်, မြို့ရိုးပေါ်မှာကော်ဇောထဲကတွန်းလှည်းသို့မဟုတ်အရှေ့တိုင်းကော်ဇောနှင့်ဖန်ဆင်း? !!! ငါကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်! sooo မသက်မသာ ...
ဆေးရုံတွင်ကလေးမွေးရန်မည်သို့နည်း။ ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ။ ကလေးမွေးဖွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ရာတွင်ကြီးမားသောအနုတ်တစ်ခုမှာခန္ဓာကိုယ်သည်ကလေးမွေးရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုသားအိမ်ခေါင်းကလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။
generic အထုပ်-ကြောင့်ပါဝင်သည်။ ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်စျေးသက်သာဆေးဆိုင်မှာအဆင်သင့်လုပ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ။ ဒီအထုပ်မီးယပ်တစ်ခါသုံးဦးထုပ်, ဖိနပ်အဖုံးများ, ရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်ဒါပေါ်မှာ။ ဃတိုတောင်းသောအရာကိုခုနှစ်တွင်တစ်ခါသုံးအနှီးအစုတခုဖြစ်ပါသည် ...
သင်မွေးကင်းစပြင်ဆင်ထားရန်, rasposhonok နှင့်အခြားအရာအားလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်နှီး?
သင်မွေးကင်းစပြင်ဆင်ထားရန်, rasposhonok နှင့်အခြားအရာအားလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်နှီး? ကျနော်တို့ 10-125နွေးခြင်းနှင့်ဒဏ်ငွေတဖဲ့, လုံလောက်အောင်ချောနှီးအပိုင်းပိုင်း swaddle မထားပါနဲ့။ အင်္ကျီများနှင့်ဆလိုက်5၏နိမ့်ဆုံးလိုအပ် ...
သင်တစ်ဦးမွေးကင်းစတစ်ဗန်းကိုဘယ်လိုရှေးခယျြသလဲ? အဘယ်အရာကိုစံသည်နှင့်အညီ, မဟုတ်အချို့သောအဘို့။ သာမန်ရေချိုးအတွက်2လအတွင်းသူတို့၏မွေးကင်းစကလေးကိုဆေးကြောခြင်းမပြုမီပေမယ့်ရေချိုး sadim ထားတဲ့အားကောင်းတောင်ပို့ဝယ်အဖြစ် ...
တစ်စုံတစ်ယောက် 25-27 ရက်သတ္တပတ်မှမွေးဖွား? သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဆွေများကိုရှိစေခြင်းငှါ,
တစ်စုံတစ်ယောက် 25-27 ရက်သတ္တပတ်မှမွေးဖွား? သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဆွေများကိုရှိစေခြင်းငှါ, သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပဲတဲ့သွေးထွက်ယခုနှစ်နွေရာသီအမှုကြီးတစ်ဦးမွေးဖွားလုပ်ဖို့ခဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်ကျောဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုမှသူ့ကိုစို့ခဲ့ပါတယ် ......
နေချင်စဖွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘယျနညျးရလဒ်များကိုအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ဆေးပြားတစ်ဗူးအတွက် dyufastonskolko ကုန်ကျဘယ်လောက်ငါ့ကိုပြောပြပါ?
ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ ငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိထုပ်ပိုးပြီးဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ၊ ဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ၊ ရလဒ်ကဘာလဲ။ ရည်မှန်းချက်ကမွေးဖွားခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါကသောက်ရမည်။ ရည်မှန်းချက်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ မသောက်ပါနှင့်။ 450 ခ။
မြှူ။ မည်မျှလအတွင်းနှင့်အတူအသား? အဘယ်အရာကို spervagovyadina, ဝက်သား, ကြက်သား? သငျသညျပေးနိုငျသောအခါဟင်းချို?
မြှူ။ မည်မျှလအတွင်းနှင့်အတူအသား? အဘယ်အရာကို spervagovyadina, ဝက်သား, ကြက်သား? သငျသညျပေးနိုငျသောအခါဟင်းချို? အဘယ်သူမျှမတည့်မှုရှိပါလျှင်ပထမဦးစွာအလွန်သေးငယ်မှာစပါးကိုကြိတ်ဖို့ပြုတ်ပိန်အသား (ကြက်သားသို့မဟုတ်အမဲသား) ပေးရခြောက်လကနေနိုင်ပါတယ် ...
ရာသီလာစဉ်အတွင်း Ovulation ???? မျိုးဥထွက်ခြင်းဖြင့်အပူချိန်များလေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအပူချိန်သည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် - ပထမအဆင့်တွင်ဟော်မုန်းများမရှိခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးသူနာပြုမိခင်ပုံကိုစားနိုင်ပါတယ် ??? သင်လုပ်နိုင်သည် ... ))) ... နီးပါး All-သာမစင်ပုံမှန်နှင့်မျှမတို့မတည့်တုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်လျှင်, အများကြီးစားသည်သူငယ်အတွက်ကြည့်ရှုသစ်ထုတ်ကုန်များမဟုတ်မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် -kushat မိခင်တွေလည်းအံ့အားသင့်ကြောင်း ...
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှာမီးယပ်သားဖွားနှင့်အတူရက်ချိန်းအဘယ်အရာကိုကိုယ်ဝန်ကိုသွားခဲ့တာလဲ အဘယ်သို့ဒီ 1-ကြိမ်မြောက်ဧည့်ခံပါသနည်း
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှာမီးယပ်သားဖွားနှင့်အတူရက်ချိန်းအဘယ်အရာကိုကိုယ်ဝန်ကိုသွားခဲ့တာလဲ အဘယ်သို့ဒီ 1-ကြိမ်မြောက်ဧည့်ခံပါသနည်း 10 ရက်သတ္တပတ်၌တည်၏။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးမွေးဖွားကဒ်။ ဟောငျးသင်တို့ရှိသမျှစာရေး ...
ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းဖှဲ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ ???? s ကိုငါတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များနှင့်လက်အား (macramé) knitting ခဲ့ပါတယ်, နှစ်ဦးစလုံးသမီးတို့, အဆင်းလှခြင်းနှင့်ကျန်းမာသူတို့ကိုယ်သူတို့မွေးဖွားခဲ့ပြီး, သင်သည်အဘယ်သို့ချင်ခဲ့သည်။ အဘယ်အလိုတော်အကြောင်းကို, သင့်သဘောထားကိုပြောင်းလဲစေ ...
Duphaston ယူပြီးအနာဂတ်အတွက်မိခင်များအဘယ်သူနည်း အဘယ်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသော?
Duphaston ကိုဘယ်မိခင်ကယူခဲ့တာလဲ။ ဘာကြောင့်သတ်မှတ်ထားတာလဲ www.babyplan.ru - ကောင်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမေးပါ။ Duphaston သည်ဟော်မုန်းကုသမှုဆေးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပရိုဂျက်စတုန်းချို့တဲ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောရောဂါဗေဒအခြေအနေများကိုပြုပြင်ရန်အသုံးပြုသည်။
သငျသညျရာသီကာလအတွင်းတစ်ဦးကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်သုံးနိုငျရှိမရှိ။ စမ်းသပ်ခြင်းတတ်နိုင်သမျှလစဉ်ကာလအတွင်းပြုသောအမှု။ ၎င်း၏စစ်မှန်သူပဲ, t ကိုမဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ရန်။ ဟော်မုန်း hCG တုံ့ပြန်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကမျှော်လင့်ထားလျှင် ...
သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျရရန်အချိန်ကိုယူသကဲ့သို့, ??? ငါနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ဝန်ဖြစ်လာသောအရာကိုအဘို့, contraceptives ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့သောက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်, ငါ2လအတွင်းမှတစ်ဆင့်ကိုယ်ဝန်ရှိဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာလုံးဝတစ်ဦးချင်းစီသည်။ ကျွန်မသဘောကျတယ် ...
အဘယ်သူသည်ပြုလေ, သူ့ကိုအပြီး AK-ဖြစ်နေလို့ပါဘယ်နှစ်ယောက်ရက်သတ္တပတ် ???? ဆေးဘက်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချင့်ကိုဖန်ဆင်း ???
အဘယ်သူသည်ပြုလေ, သူ့ကိုအပြီး AK-ဖြစ်နေလို့ပါဘယ်နှစ်ယောက်ရက်သတ္တပတ် ???? ဆေးဘက်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချင့်ကိုဖန်ဆင်း ??? ငါကအခြား၏မေးခွန်းကိုနားလည်ပါသည်။ သို့သော်နေဆဲနည်းနည်းနဲ့ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းမရှိဘဲလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်နိုင်မလဲ? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်း, ပါလိမ့်မယ် ...
ကလေးမွေးဖွား 29 ရက်သတ္တပတ်မှာစတင်ရှိမရှိနှင့်ထိုသူငယ်ရှင်သန်မယ်လို့ရှိမရှိ ????
ကလေးမွေးဖွား 29 ရက်သတ္တပတ်မှာစတင်ရှိမရှိနှင့်ထိုသူငယ်ရှင်သန်မယ်လို့ရှိမရှိ ???? ငါကံမိန်းကလေး ((((( ... သင် .A ဖြစ်နိုင်သည်မှားယွင်းသော skhvatochki ကျွန်မရဲ့ကလေးမွေးဖွားခဲ့သည် 30 မွေးဖွားခဲ့သည် Unfortunatel ...
ဒိုင်းနမစ်အတွက် ultrasound ကဘာလဲ? pelvic ultrasound
ဒိုင်းနမစ်အတွက် ultrasound ကဘာလဲ? တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများ၏ ultrasound ဤသည်သတ်မှတ်ထားသောကြားကာလနှင့်အတူ pelvic ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခု ultrasound စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများ၏ Ultrasound သည်သားအိမ်ကိုစစ်ဆေးသည် ...
အခါနံနက်အနာရောဂါကိုယ်ဝန်အတွက်စတင်သည်? အခါနံနက်အနာရောဂါကိုယ်ဝန်အတွက်စတင်သည်? တစ်ဦးကိုချက်ချင်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်မ toxicosis ပထမနှစ်ဝက် CAN ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါမတိုင်မီ ...
49 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,283 စက္ကန့်ကျော် Generate ။